Iyo yakanakisa mitambo yePokémon mafani e2021 | la-manette.com
30 octobre 2021 ndima Corinne Rancourt
Unoda kutamba pokemon mitambo ? Ipapo iyi rondedzero yemitambo yakanakisa yePokémon mafani inofanirwa kukufarira nekuti ine mamwe matombo akavanzika.
Kwemakore, Pokémon yakakwanisa kubata mwoyo nepfungwa dzevateveri nekubatana kwayo asi kupindwa muropa gameplay loop.
NePokémon, iwe unoziva iwe unogona kutarisira mutambo wakatarisana tora, kurwa uye kubereka boka guru rezvisikwa zvinopfuura 800 zvakasiyana. Asi mugadziri weJapan Game Freak agara aine chokwadi chekuomerera kune chaiyo chimiro kana uchigadzira zvinyorwa zvitsva.
Ichi ndicho chikonzero iyo yakawanda yemitambo yePokémon, ingangoita iyo iri mumutsara mukuru, inoita seisina nguva uye inokwanisa kukwezva kune vakasiyana siyana yevatambi veese mazera nemamiriro.
RELATIVE: Iyo yakanakisa Pokémon mitambo yenguva dzese
Vamwe vevanonyanya kufarira uye vane zvipo zvehunyanzvi vatambi vakatogadzira yavo Pokémon mitambo. Mafeni anowanzo gadzirisa mitambo iripo kugadzira "ROM-hacks", pamwe nemitambo yepakutanga fan inosuma zvisikwa zvitsva, nyaya uye kunyange mitambo mechanics.
Mune iyi rondedzero yemitambo, tinokuunzira yakanakisa Pokémon fan mitambo inosuma mazano matsva uchiramba wakatendeka kumweya wemitambo yekutanga.
Ziva kuti isu tichagadziridza iyi runyorwa mune ramangwana nemazita matsva, saka ita chokwadi chekutarisa nguva nenguva.
Pokémon Uranium yakave nenguva yakareba yemakore mapfumbamwe yekuvandudza isati yaburitswa muna 2016 uye kuve imwe yeanonyanya kufarirwa-akagadzirwa Pokémon mitambo kusvika parizvino. Gara mudunhu idzva reTandor, mutambo uyu unoratidzira anopfuura zana nemakumi mashanu epakutanga Pokémon madhizaini uye anouisa nyowani "Nuclear" kutaipa.
Chimiro chemutambo chinoratidza iyo yemitambo yepamutemo. Mutambi anofanirwa kuwana ese masere mabheji ejimu uye kukunda Tandor League. Ari munzira, achasangana nenjodzi ine njodzi iyo inokonzeresa nyukireya fusion mudunhu rese, ichityisidzira kuchengetedzwa kwevanhu uye Pokémon.
Pokémon Phoenix Rising ndeye episodic, fan-yakagadzirwa Pokémon RPG yakagadzirwa uchishandisa RPG Mugadziri XP uye iyo Pokémon Essentials injini. Gara munzvimbo yasakadzwa nehondo yeHawthorne, mutambo unokukumbira kuti udzorere rugare panyika nekumutsa ane mukurumbira Ho-oh uye nekuishandisa kukunda mambo anodzvinyirira.
Asi iyo ingori chidimbu chechando. Phoenix Rising ine nhamba inoshamisa yezvimiro zvawaisazotarisira kuona mumutambo wePokémon. Izvi zvinosanganisira mibairo yakavakirwa pasarudzo dzinokanganisa nyaya, miti yehunyanzvi ine maperks akagadzirirwa akasiyana ekutamba, uye quest system inoronga mukati-mutambo zviitiko.
Verenga zvakare: Nzira yekuona mafirimu eTransformers muhurongwa?
Chikamu chekutanga chakaburitswa muna 2018 uye chikamu chechipiri parizvino chiri mukugadzirwa.
3. Insurgency Pokemon
Pokémon Insurgence mutambo wefani wakagadzirwa uchishandisa RPG Mugadziri XP uye unobva kumusiki mumwechete saPokémon Zeta uye Omicron, mumwe mutambo wefani usina kuita runyorwa urwu asi uchiri kufanira kuongororwa.
Gara munharaunda nyowani, iyo Torren Dunhu, mutambo uyu unokutendera kuti uongorore nyika yasakadzwa nehondo umo mapokemon-anonamata machechi anorwira hutongi hwenyika.
Pamwe nekuve nenhoroondo yakasviba zvakanyanya kupfuura mitambo yepamutemo, Insurgence ine zvimwe zvezvakakumbirwa maficha kubva kumitambo yapfuura. Aya ndiwo Mega Evolutions, Mudzidzisi Customization, Pokémon anotevera Murairidzi wako akatenderedza Mepu yeNyika, uye Chakavanzika Mabhesi.
Mutambo uyu unosumawo yakasarudzika kirasi yePokémon inonzi Delta, ayo akasiyana chaizvo ekutaipa / mavara musanganiswa emhando dziripo dzePokémon.
4. Wachi Pokémon
Pokémon Clockwork mumwe mutambo wefani wakagadzirwa kubva kuPokémon Essentials. Anoona vatambi vachifamba munzvimbo ine rustic Rosari, uko vanhu nePokémon vanogarisana vachizvininipisa.
Iwe unodaidzwa kuita chiito nemumwe kunze kwengano Pokémon Celebi, uyo akafamba nenguva kuti akuyambire nezve kurwiswa kuri kuuya kwakarongwa neasinganzwisisike Epsilon timu, iyo ichasiya Rosari iri matongo.
Chinangwa chako chakajeka: kumisa Chikwata Epsilon kuita hurongwa hwavo hwakashata nguva isati yakwana.
Clockwork inosanganisira kutaridzika kweGeneration 1-4 Pokémon uye inosvitsa huwandu hwezvinhu zvakasarudzika zvinosanganisira yekuda system, masikati / husiku kutenderera, nguva yekufamba mechanics, mafambiro matsva, gameplay rebalancing uye evolutions ine simba yePokémon inogona kuitika pakati pekurwa.
5. Pokémon Kuberekwazve
Pokémon Reborn mumwe mutambo we fan unoshandisa iyo RPG Mugadziri XP injini kuendesa chiitiko chitsva chePokémon chakafemerwa naPokémon Emerald. Mutambo uyu wakaiswa muguta reReborn City, guta riri kudzikira riri kutambudzwa nehutsotsi uye kusvibiswa.
Hunhu hwako hwakapihwa basa rekudzorera dunhu pakubwinya kwaro kwekare nekugadzira mubatanidzwa nevamwe varairidzi uye kukunda sangano rakaipa rinotonga guta.
Panyaya yema mechanics matsva, Kuzvarwa patsva kunounza mhedzisiro yemunda. Izvi zvinogona kugadzirisa nhandare yehondo kuitira kuti ufarire mamwe marudzi ePokémon, ingave kwenguva yakareba kana ipfupi.
Pamusoro pezvo, mutambo uyu unoratidzira gumi nemasere emitambo yekupikisa, imwe yemhando yega yega, ichiiita imwe yemitambo yakarebesa fan pane iyi runyorwa.
Verenga zvakare: Maitiro ekushandura skrini fomati pa Android - PNG kuenda kuJPG uye zvinopesana
6. Pokemon Rejuvenation
Pokémon Rejuvenation yakagadzirwa nevanhu vakafanana vakagadzira Kuberekwazve, saka zvakasikwa inosanganisira akawanda akafanana maficha.
Pano isu tine inonakidza mamiriro matsva, iyo Aevium dunhu. Yaimbova rudzi rwakabatana uye rwakasimba, Aevium yakawira mukusagadzikana mushure medambudziko guru rinozivikanwa seStorm-9. Kubva ipapo, vanhu veAevium vakavaka patsva uye vakadzoreredza runyararo munyika yavo.
Nekudaro, zvinhu zvinotora shanduko yakaipa apo sangano rakashata rinonzi Team Xen rinobuda mumumvuri nehurongwa hwekuparadza zvishoma kufambira mberi kwakaitwa nevagari veAevium.
Pamusoro peiyo 18 yakajairika magyms, Rejuvenation inowedzera 8 nhengo dzevakuru kuti dzirwe uye inopa zvakatowanda mativi quests kupfuura Reborn, kweanopfuura maawa makumi manomwe enguva yekutamba.
7. Moto Ash Pokémon
Pokémon Fire Ash ndeye yakagadziridzwa Pokémon FireRed ROM-hack iyo inoteedzera zvakanyanya kushanya kweAsh Ketchum muPokémon anime. Mumutambo, vatambi vanodzora Ash paanenge achigadzirira kuenda kunotsvaga Indigo League uye ave Pokémon Master.
Asi handizvo zvega: Ash the Fire inobvumira vatambi kuti vaende kumatunhu ese eiyo akateedzana 'nhoroondo, uye kukwikwidza pamusoro pe50 Gym Vatungamiriri, mukuwedzera kune vakasiyana-siyana vaAsh vanofamba navo uye vakwikwidzi. .
Mutambo uyu une runyorwa rweanopfuura mazana masere akasiyana Pokémon kubva kuGenerations 800-1 uye yakagadziridzwa kuti ibatanidze Mega Evolutions, Alolan Pokémon mafomu, uye kunyange Greninja kutaridzika kubva kuAsh.
Pokémon Prism iPokémon Crystal ROM-hack pamwe nePokémon Brown sequel, inova iyo pachayo Pokémon Red ROM-hack.
Mutambo uyu unotanga naPrism, mwanakomana / mwanasikana wemurairidzi ane mukurumbira dhiragoni Lance, achitamba mutangi remugodhi paanoerekana atadza kudzora ndokumutumira pasi nenzira isina kutaurwa.
Nzira iyi inovaendesa kudunhu reNaljo, nzvimbo isati yamboongororwa uye yakabatikana nemaindasitiri. Mushure mekutora Lavitar uyo akarasikirwa nemurairidzi wake, mutambi anotanga rwendo kunotora mabheji makumi maviri ejimu mumatunhu maviri, Naljo neRijon (Pokémon Brown).
Mutambo uyu unoratidzira medley yePokémon kubva kuzvizvarwa 1-4 uye inosuma mitsva mini-mitambo, maTM, uye yekutanga Gasi / Ruzha / Nzara mataipi.
Pokémon Sage yakatanga sechirongwa chekushandira pamwe pa4chan's / vp / (Pokémon) foramu nechinangwa chekugadzira mutambo wepakutanga wePokémon.
Yakaramba ichikura kusvika timu yakazofunga kugadzira demo yakazara zvichienderana nezvisikwa zvavo zvitsva. Gara munharaunda yeLatin America-yakafemerwa Urobos, mutambo unokuona iwe uchitanga chiitiko chitsva kuti uve Pokémon tenzi.
Verenga zvakare: Maitiro ekuchinja bhatiri yePS4 controller?
Chinonyanya kufadza ihuwandu hwezvinyorwa zvepakutanga zvakabatanidzwa muDemo pfupi yeSage, inopera kana wawana bheji rechitatu rejimu. Yese Pokémon, nzvimbo uye mavara muSage ndeye epakutanga uye anodhirowa zvakanyanya paLatin America tsika, inova yakanaka kupatsanura kubva kumitambo yepamutemo.
Runyerekupe ruchangoburwa runoratidza kuti yekupedzisira uye yakagadziridzwa vhezheni yemutambo iri kubuda nezvimwe zvekuwedzera munguva pfupi.
Parizvino, isu takangosanganisira mune ino mutambo runyorwa 2D Pokémon mitambo yakavakirwa sprites. Nekudaro, kune mashoma 3D Pokémon fan mitambo inofanirwa kutaurwa. Pokemon MMO 3D inopa zvizere kuongororwa 3D nharaunda maunogona kupindirana uye kurwisa Pokémon nevamwe varairidzi munguva chaiyo.
Kubudirira kwemutambo kwakatanga muna Kukadzi 2015 uye kunoenderera nanhasi, kunyangwe saiti yepakutanga yave pamudyandigere.
Mashandiro anoita mutambo anonakidza: panguva dzehondo, mutambi ane kutonga kwakananga pamusoro pekufamba uye kurwiswa kwePokémon yavo. Kufamba kwega kwega kune kutonhorera kwakasiyana, uye vatambi vane sarudzo yekutiza kusangana nemusango kana vava kuda kupera simba.
Kana iwe uchifarira Pokémon MMORPG asi uchida kutaridzika kwemitambo yekare ye2D, saka PokéMMO inofanirwa kutariswa.
Pakutanga, mutambo wacho waive wakaganhurirwa kushanduro dzakasimudzwa dzematunhu eKantô neHoenn; zvisinei, inogadziridza mumakore apfuura yakawedzera kupa kwayo kuti ibatanidze iyo Generation IV Sinnoh dunhu.
Mumutambo uyu, vatambi vakatarisana nekureba: kukunda Vatungamiri veGym, Elite Four, uye Champions kubva kudunhu rega rega.
Uyezve, vatambi vanogona kurwa, kutengesa, uye kunyange kuumba zvikwata nevamwe vatambi pamhepo. Parizvino, PokéMMO iri kugadzirira kuwedzera zvakanyanya uye kuwedzera Gen V Unova dunhu.
20 yakanakisa software yekugonesa kudhirowa kwako kune vanotanga (premium, yemahara uye online)